Basikety – “Amboaran’ny filoha” : lasan’ny ASCB Boeny sy Fandrefiala Analamanga | NewsMada
Basikety – “Amboaran’ny filoha” : lasan’ny ASCB Boeny sy Fandrefiala Analamanga
Norombahin’ny ASCB Boeny teo amin’ny sokajy lehilahy ary ny Fandrefiala Analamanga vehivavy, ny “Amboaran’ny filoha”, taranja basikety. Fihaonana, notanterahina tetsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, ny asabotsy lasa teo. Adin’ny samy Analamanga teo amin’ny vehivavy.
Lavon’ny Fandrefiala, tamin’ny isa tery 49 no ho 48 ny MB 2 All, teo amin’ny famaranana. Niady ary nampitsanga-mitoetra hatramin’ny farany ny fihaonan’ny roa tonta. Nifanenjehana hatrany ny isa teny amin’ny solaitra be. Efa tany amin’ny segondra farany vao tafavoaka ny Fandrefiala tamin’ity.
Ekipa diso mifankalala tsara ny roa tonta ka samy nitandrina tamin’ireo fahadisoana, tamin’ny fiarovan-tena sy ny fanafihana. Nitarika tamin’ny isa ny MB 2 All tany amin’ny 5 mn mialoha ny fahataperan’ny tapa-potoana fahefatra. Tsy nahakivy an-dry Tahina sy ny namany anefa izany ka nahitam-bokany, tany amin’ny 30 segondra tsy hiravana. Marihina fa tsy mbola afa-bela tamin’ny Fandrefiala indray izany ny MB 2 All tamin’ity, izay efa resin’izy ireo, tany amin’ny fifanintsanana isam-bondrona. Voahosotra ho mpilalao nahafaty baolina be indrindra i Fenoharisoa Judith ary mpilalao mendrika kosa i Ravaka Sarobidy, izay samy avy amin’ny Fandrefiala avokoa.
Nanjakazaka ny ASCB Boeny
Tamin’ny isa 80 no ho 71 no nanjeran’ny ASCB ny SBBC, izay samy ekipan’ny ligin’i Boeny, teo amin’ny lehilahy. Tsy nifampitsitsy mihitsy ny roa tonta, satria samy naneho ny tanjany ireo mpilalaon’ny andaniny sy ankilany, nandritra ny tapa-potoana efatra nilalaovana.
Nitarika tamin’ny isa 40 no ho 35 ny ASBC, teo am-pialan-tsasatra. Tsy niova ny hafainganam-pandehan’ny fihaonana, teo amin’ireo tapa-potoana roa farany fa vao maika nihamafy. Nanantombo tamin’izany ireo mpilalaon’ny ASCB, ka nanomboka nitarika tamin’ny isa ry zalahy.
Porofon’izany, tamin’ny isa 67 no ho 50 ny nisarahana teo amin’ny 10 mn fidirana fahatelo. Teo dia efa nanomboka natoky tena ry zalahy, tamin’ny handrombahany ny fandresena. Norombahin’i Livio Rocheteau avokoa tamin’ity ny mpilalao nahafaty baolina be indrindra sy ny mpilalao mendrika. I Zo Nandrianina, mpilalaon’ny JEA sy Andriamaro Tsiry kosa no mendrika tamin’ny tifitra isa telo.
Marihina fa nanohana ity fiadiana ny “Amboaran’ny filoha” ity ny Telma izay nanolotra lelavola 2 tapitrisa Ar ho an’ny ASBC ary 1 tapitrisa Ar kosa ho an’ny Fandrefiala. Nahazo famataranandro “Telma watch” daholo kosa ireo mpilalao mendrika rehetra.
Dingana manaraka ny fifaninanam-pirenena ho an’ny basket à 3, hatao ny volana jona, izay iarahana amin’ny Telma hatrany.